Tantara: Ny Mandan’i Jerosalema - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Araka ny ﬁhevitrao, inona no tsapan’ny olona velona teto nandritra ireo taona rehetra tsy nisian’ny manda manodidina ny tanànany? Tsy nahatsiaro ho tsy nanana ahiahy izy. Mora tamin’ny fahavalony ny ho tonga tao ka hanaﬁka azy ireo. Izao anefa io lehilahy atao hoe Nehemia io dia nanampy ny olona tamin’ny farany mba hanorina indray ny manda. Fantatrao ve hoe iza i Nehemia?
‘Avelao aho ho any Jerosalema’, hoy i Nehemia, ‘mba hahafahako hanorina indray ny manda.’ Tsara fanahy aoka izany i Artaksersesy Mpanjaka. Nilaza izy fa mahazo mandeha i Nehemia, ary nanampy azy izy mba hahita hazo hanaovana ny sasany amin’ny fanorenana. Tsy ela taorian’ny nahatongavan’i Nehemia tany Jerosalema, dia nambarany tamin’ny vahoaka ny ﬁkasany. Tian’izy ireo ilay hevitra, ka hoy izy ireo: ‘Aoka isika hanomboka ny fanorenana.’
Rehefa hitan’ny fahavalon’ny Israelita ny ﬁakaran’ny manda, dia hoy izy: ‘Hiakatra isika ka hamono azy ireo, ary hampitsahatra ny asa fanorenana.’ Nefa ren’i Nehemia ny amin’izany, ary nomeny sabatra sy lefona ny mpiasa. Dia hoy izy: ‘Aza matahotra ny fahavalonareo. Miadia ho an’ny rahalahinareo, ho an’ny zanakareo, ary ho an’ny tranonareo.’
Nahery fo aoka izany ny olona. Nataony vonona andro aman’alina ny ﬁadiany, ary nanohy ny fanorenana izy. Koa tao anatin’ny 52 andro dia vita ny manda. Izao ny olona dia afaka nahatsapa tsy fananana ahiahy ao anatin’ny tanàna. Nampianatra ny vahoaka ny lalàn’Andriamanitra i Nehemia sy Ezra, ary sambatra ny vahoaka.
Nefa ny toe-javatra dia mbola tsy nitovy tamin’ny talohan’ny nitondrana ny Israelita ho babo tany Babylona. Ny vahoaka dia notapahin’ny mpanjakan’i Persa ary tsy maintsy nanompo azy. Nefa nampanantena i Jehovah fa haniraka mpanjaka vaovao iray, ka io mpanjaka io no hitondra ﬁadanana ho an’ny olona. Iza moa io mpanjaka io? Ahoana no hitondrany ﬁadanana eto an-tany? Eo amin’ny 450 taona no lasa alohan’ny hahafantarana zavatra hafa momba izany. Avy eo dia tonga ny fahaterahana nalaza tokoa an’ny zazakely iray. Tantara hafa iray anefa izany.
Nehemia toko voalohany ka hatramin’ny faha-6.
Vakio ny Nehemia 4:1-23.
Inona no nanosika ny Israelita hanohy ny fanorenana, na dia mafy aza ny fanenjehana? (Neh. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Isaia 65:13, 14)
Manao ahoana ny herin’ny ﬁnoana, rehefa jerena ny fahavitan’ny mandan’i Jerosalema tao anatin’ny roa volana? (Sal. 56:3, 4; Matio 17:20; 19:26)